by ကယ်လီ Mahoney
လိင်ယဉ်ကျေးညစာစကားပြောဆိုမှုအဘို့ဖြစ်စေခြင်းငှါမပြုစေခြင်းငှါသူတို့အကိစ္စရပ်များကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အမှုအရာ၏သဘာဝအမိန့်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရစျယာနျအဖြစ်လိင်ကိစ္စရပ်များချဉ်းကပ်, ကြှနျုပျတို့ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းပြကြစေရန်ရှိသည်။ ကျနော်တို့အကြံဉာဏ်ကမျြးစာကိုကြည့်ရှုသောအခါ, အကြောင်းကိုကျမ်းချက်တွေကိုများများရှိပါတယ် abstinence မတရားသောမေထုန်အနေဖြင့်:
1 သက်သာလောနိတ် 4: 3-4
ဘုရားသခငျသညျသငျသညျသနျ့ရှငျးသောဖြစ်ဖို့လိုသည်, ဒါကြောင့်လိင်ကိစ္စရပ်များအတွက်အကျင့်ပျက်ဖြစ်ပါဘူး။ ရိုသေလေးစားမှုနှင့်သင့်ဇနီးရိုသေစွာပြုလော့။ (CEV)
1 ကောရိန္သု 6:18
လိင်ကိစ္စရပ်များအတွက်အကျင့်ပျက်ဖြစ်မနေပါနဲ့။ ဒါကအဘယ်သူမျှမကအခြားအပြစ်တရားသောလမ်းအတွက်သင့်ကိုယ်ပိုင်ခန္ဓာကိုယ်ဆန့်ကျင်သူသည်အပြစ်ရှိ၏။ (CEV)
ကောလောသဲ 3: 5
ဒါကြောင့်အသေခံရန်သင့်အားအတွင်းခြောငျးအပြစ်ရှိသော, မွကွေီးအမှုအရာထားတော်မူ၏။ မတရားသောမေထုန်, ညစ်ညူး, တပ်မက်သောစိတ်, ဆိုးသောအလိုဆန္ဒများနဲ့ဘာမှရှိသည်။ တစ်လောဘကြီးသူတစ်ဦးသည်ဤကမ္ဘာ၏အမှုအရာကိုးကွယ်, ရုပ်တုကိုကိုင်ကွယ်ဘို့, လောဘကြီးဖြစ်မနေပါနဲ့။ (NLT)
ဂလာတိ 5: 19-21
သင်သည်သင်၏ဇာတိပကတိ၏အလိုဆန္ဒများကိုလိုက်နာတဲ့အခါ, ရလဒ်ကအရမ်းရှင်းပါတယ်နေသောခေါင်းစဉ်: မတရားသောမေထုန်, ညစ်ညူး, ကိလေသာလွန်ကျူးအပျော်အပါး, ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်း, တတ်, ရန်လိုမုန်းတီးမှု, ခို, ငြူစူသောစိတ်, အမျက်ဒေါသ, တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ရည်မှန်းချက်, စိတျဝမျးကှဲ, ဌာနခွဲ, ငြူစူခြင်း၏ကြိမ်တိုင်တိုင်, မူး, ရိုင်း ပါတီများ, ဤကဲ့သို့သောအခြားအပြစ်များကို။
ငါမတိုင်မီရှိသည်အဖြစ်ငါ့ကိုအသက်ရှင်သောမျိုးအသကျရှငျမညျသူမဆိုသညျဘုရားသခငျ၏နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမပေးမညျဖွစျကွောငျး, နောက်တဖန်သင်တို့ကိုပြောပြပါရစေ။ (NLT)
1 ပေတရု 2:11
ချစ်ခင်ရပါသောသူငယ်ချင်းငါသည်သင်တို့၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုစစ်တိုက်ရသောအပွစျရှိအလိုဆန္ဒများ, ကြဉ်ရှောင်ဖို့, နိုင်ငံခြားသားများနှင့်ပြည်ပရောက်အဖြစ်, သင်တိုက်တွန်းကြသည်။ (ထို)
2 ကောရိန္သု 12:21
သငျသညျအများတို့သည်လည်းသင်၏အအပြစ်ဟောင်းကိုတက်ပေးထားဖူးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါငိုနဲ့တူခံစားမိပါလိမ့်မယ်။ သင်ဆဲ, အကျင့်ပျက်သောအရာတို့ကိုလုပ်နေတာညစ်ညမ်းသောနှင့်ရှက်စရာနေကြသည်။ (CEV)
ဧဖက် 5: 3
အဘယ်သူမျှမမတရားသောမေထုန်, ညစ်ညူး, ဒါမှမဟုတ်လောဘသငျတို့တှငျရှိကွပါစို့။ ထိုသို့သောအပြစ်များကိုဘုရားသခငျ၏တလူတို့တွင်အဘယ်သူမျှမနေရာရှိသည်။ (NLT)
ကိုနေ့ရက်ကာလ၌ကဲ့သို့မ carousing နှင့်မူးအတွက်မဟုတ်ဘဲလိနှင့်အာရုံငါးပါးအတွက်မဟုတ်ဘဲခိုက်ရန်နှင့်ငြူစူသောစိတ်အတွက်စနစ်တကျပြုမူကြကုန်အံ့။ (NASB)
အိမ်ထောင်ရေးကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်။ လူတစ်ဦးနှင့်အတူသင်၏အသက်တာ၏ကျန်သုံးဖြုန်းဖို့ရှေးခယျြမှုပေါ့ပေါ့ယူခံရဖို့မရှိ, လက်ထပ်ထိမ်းမြားတဲ့အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူသင်ရှိသည်ဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်မီလိင်ရှိသည်ဖို့ရွေးချယ်မှု:
ဟေဗြဲ 13: 4
လက်ထပ်ထိမ်းမြားဖို့ဂုဏ်အသရေ Give နှင့်အိမ်ထောင်မှာအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်သစ္စာရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်အကျင့်ပျက်နေသောလူများနှင့်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ကျူးလွန်သောသူတို့အားတရားစီရင်တော်မူပါလိမ့်မယ်။ (NLT)
1 ကောရိန်သု 7: 2
ကောင်းပြီ, သင့်ကိုယ်ပိုင်ခင်ပွန်းသို့မဟုတ်ဇနီးရှိခြင်းကငျြ့ပကျြတစ်ခုခုလုပ်နေတာကနေသင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်သင့်ပါတယ်။ (CEV)
လက်ထပ်ထိမ်းမြားကိုသင်အလေးအနက်ထားသင့်ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးနှစ်များတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေတဲ့အရာတစ်ခုခုမဖြစ်စေခြင်းငှါနေစဉ်, ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏။ အဲဒီမှာမေတ္တာနှင့်တပ်မက်များအကြားတစ်ဦးခြားနားချက်ဖြစ်တယ်, abstinence ခြားနားချက်ကောင်းတစ်ခုသဘောပေါက်နားလည်နိုင်စွမ်းမှလာ:
2 တိမောသေ 2:22
နုပျိုတပ်မက်ခြင်းအတိုင်းလည်းပြေးတတ်၏ ဒါပေမယ့်ဖြောင့်မတ်, ယုံကြည်ခြင်း, ချစ်ခြင်း, စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးထဲကသခင်ဘုရားကိုပဌနာသောသူတို့နှင့်အတူငြိမ်းချမ်းရေးမှီအောင်လိုက်လော့။
မဿဲ 5: 8
ဘုရားသခငျသညျအဘယ်သူ၏နှလုံးသားများဖြူစင်သောသူတို့အားကလူကောငျးခြီးပေး။ သူတို့ကသူ့ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်! (CEV)
ဘုရားသခငျသညျသူတို့ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာ; နှင့်ဘုရားသခင် "အသီးအနှံများ Be များပြားခြင်း, မြေကြီးတပြင်ဖြည့်ပါ, ထိုသို့နှိမ့်ချ, သူတို့ကိုကလည်း, နှင့်ပင်လယ်ငါးကျော်နှင့်မိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်ကျော်နှင့်မြေကြီးပေါ်မှာလှုပ်ရှားအသက်ရှင်သောသတ္တဝါအပေါင်းတို့ကိုအုပ်စိုး။ "(NASB)
အဘယ်အရာကိုငါတို့သည်ငါတို့၏အလောင်းတွေပြုညျဘုရားသခငျ၏မကျြမှောကျ၌အရေးပါနှင့်လိင်တစ်ဦးကိုယ်ထင်ရှားလုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူအခြားသူများကိုပြုမူဆက်ဆံသကဲ့သို့ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်ကြောင်းလမ်းပြုမူဆက်ဆံရပါမယ်, ဒါ abstinence ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလောင်းတွေနှငျ့ဘုရားသခငျကိုလေးစားဆိုလိုတယ်:
1 ကောရိန္သု 6:19
သင်တို့သည်ဧကန်အမှန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်အသက်ရှင်တော်မူသည်ဘယ်မှာဗိမာနျတျောကြောင်းကိုငါသိ၏။ ဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အထဲ၌သည်နှင့်ဘုရားသခင်ထံမှလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့သည်နောက်တဖန်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ကြသည်။ (CEV)
ရောမ 14 ကိစ္စများ - သမ်မာကမျြး Clear ကိုမဖြစ်တဲ့အခါ, ငါသည်အဘယ်သို့ပြုပါသလား?
သမ်မာကမျြးပုံပြင်အကျဉ်းချုပ် - ကကောင်းပြီမှာအမြိုးသမီးတ
သမ်မာကမျြးပုံပြင်တွေကို Summaries (အညွှန်း)
ဂါလိလဲပွညျတိုင်းဒေသကြီး၏ပရိုဖိုင် - သမိုင်း, ပထဝီ, ဘာသာရေး
Xavier တက္ကသိုလ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်ရဲ့တက္ကသိုလ်အဘို့အ ACT ရမှတ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်
Redfish Locate လုပ်နည်း
'' Quand, '' Lorsque, '' Lors က de, 'နဲ့' ဆွဲပြား ': ခြားနားချက်ကဘာလဲ?
အဆိုပါ SQ3R Method ကိုအတူသင့်ရဲ့စာဖတ်ခြင်းမြန်နှုန်းပြီးပြည့်စုံစွာတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်
အဆိုပါနျ Classical ကာလအတွင်းမှာတော့ဂီတပွဲများ
ယင်းအောက်စဖို့ (ဒါမှမဟုတ် Serial) ကော်မာဆိုတာဘာလဲ
Skyquakes ရီးရဲလ်ဖြစ်ပါသလား အဆိုပါနက်နဲသောအရာ Boom ၏သိပ္ပံ
တစ်ခုလူကြီးအဖြစ်အွန်လိုင်း High School တွင်ဒီပလိုမာရယူနိုင်သောလုပ်နည်း
19 ရာစု America မှာကျွန်စနစ်
ချွေး Lodge အခမ်းအနားများ၏ကုစားခြင်းအကျိုးကျေးဇူးများ၏နေရသည်
အဆိုပါ 1966 Ford ကား Mustang Sprint 200
Re-အဆောက်အအုံအကြမ်းဖက်ပြီးနောက် - တစ်ဦးကဓာတ်ပုံ Timeline ကို
စံသတ်မှတ်ချက်များနဲ့ Standard ပြည်နယ်အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ